Qophii Addaa Ka Guyyaa Filannoo Biyyoolessaa Itiyoophiyaa – Welcome to bilisummaa
Qophii Addaa Ka Guyyaa Filannoo Biyyoolessaa Itiyoophiyaa
Sirna sagalee kennuu magaalaa Amboo
Filannoo har’a, Caamsaa 24, bara 2015 Itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru ilaalchisuun, gabaasaalee keenya magaalaalee adda addaatti bobba’anii jiran dubbisnee jirra. Ka Naannoo Sabaa fi Sab-0lammootaa fi Uummatoota Kibbaatti bobba’ee jiru – Henook Semmaagzeer, Muummichi Ministaraa Itiyoophiyaa – Obbo Haile-mariam Dessalenyi – aanaa filannoo Gunnenotti argamuun ennaa sagalee kennan dubbisee jira.
Namoota bakkawwan adda addaatti sagalee kennaa jiranii fi ka biroo illee dubbisnee jirra. Hayyoonni biyya keessaa deemsa filannoo ilaalaa jiranis hubannaa isaanii nuuf ibsanii jiran. Waan maraafuu guutummaa qophii keenya addaa.
Filannoo Itiyypiyaa ilaalchisee qophii qindaa’e armaan gaditti caqasaa
Previous Barattoonni Yunversiitii gara garaa akka sagalee hin kennine ugguraman jedhu
Next Ilaamn Oromoo Nagaan Afur Rasaasaan Rukutaman